China Glue roller Kugadzira uye Fekitori | Kangpa
Processing: yepamusoro kupisa kurapwa maitiro, mushure mekudzima uye kupisa, kutendeuka, kuenderana, nezvimwewo, chibhakera chekupindira ruoko kupisa kupisa, kushushikana kwekushushikana, kutendeuka kwakanaka, yepakati frequency quenching, kukuya kwakanaka, gobvu rakaoma chrome yakanamirwa pamoto, kukuya kwakanaka uye kwakanyanya kukuya .
Kutwasuka, kumhanya, kuomarara ≤0.002mm. Mushure mekudzima, pamusoro pekuomarara kwemupumburu ndi HRC55 ~ 58, uye mushure mekuoma kwechromium yakanamirwa pamusoro, kuomarara kuri pamusoro peHDRC65.
Kambani yedu inonyanya kugadzira kugadzirwa kwemhando dzakasiyana-siyana. Kuchenesa roller, acrylic plate roller, sanitary napkin inonaya firimu kumanikidza roller, isiri-yekumanikidza yekumanikidza roller yemota mateki. Zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya mumapurasitiki, dehwe, bepa, huni, zvekuchenesa, machira asina kurukwa, kapeti uye mamwe maindasitiri. Iyo kambani ine zvigadzirwa zvemberi senge makuru lathes, ekugaya michina, ekukuya, girazi kukuya uye kupora michina.
Kana zviri zvekutsvagisa uye kugadzira kweanowirirana pateni rollers, maitiro ekugadzira anosanganisira kugadzira kweye roller muviri, kurapwa kwepamusoro, akasiyana madhipatimendi ekuveza uye electroplating kurapwa. Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, isu tinogona kupa akasiyana maratidziro e roll yepakati, roll roll (yakanyorova roll, yakavharwa roll, chrome roll, kwakakurudzira roll, anilox roll) uye yakanaka kukuya maitiro. Kugadziriswa kweakare marabha anotenderera, kugadzirisazve emabhaudhi erabha, kugadzirwa kwemabhaudhi matsva erabha (bepa rinogadzira rollers, kudhinda uye kudhaya matombo, kudhinda ma rollers, metallurgical rollers, roller roller machira, sponge rollers, akasiyana erabha mairi, nezvimwewo).
Kambani yedu yakagadzira kuita yakazara yakazara masevhisi, anosanganisira ma roller eiyo indasitiri yepurasitiki, machira, zvigadzirwa zvemapepa, simbi, girazi, kurongedza, kushongedza uye michina michina. Gamuchirai shamwari kubva kumativi ese epasi kushanyira, kutungamira uye kutaurirana bhizinesi.
Pashure: Mhepo yekuwedzera shaft
Zvadaro: Oily guruu laminating muchina KP-YJ128C
Glue Anonyorera Roller Machine
Kupisa Melt Glue Roller Anonyorera
Rubha Glue Roller
Kupisa Melt Glue Anonyorera, Yakapisa Melt Glue Laminating Machine YeJasi, Pur Hot Melt guruu Nonwoven Laminating Machine, Kupisa Melt Glue Laminating Machine Ine Ce Chitupa, Pur Hot Melt Inonamatira Laminating Machine, Otomatiki Inopisa Melt Glue Laminating Machine,